Oromo - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools » Departments » Advanced Learning » Translations for English Learners » Oromo
Qormaataaf Akeeka Barnoota Fooya’aa
Yeroo Barnoota Foya’aaf Akeekni Itti Taasifamu Hagayya 28 – Mudde 7, 2020
Hubachiisa: Qormaanni yeroo Arfaasaa/Ganna 2020-2021 ga’umsa bara barnootaa 2021-22 murteessuudhaaf.
Barnoota Fooya’aa irratti fedhii qabdanuuf galatoomaa. Sababa COVID-19 irraa kan ka’e haalli adeemsa keenyaa jijjiramee jira. Yeroon barattoota itti akeekan Hagayya 28 ni banama, garu yero akeektan guyyaa qormaataa akka filattan hin gaafatamtan. Yeroo manneen barnootaa banaman tilmaamuu ijaa hin dandeeyeef, ykn dandeettii ammamiitiin akka banaman ijaa hin beekneef yeroo ammaa kana guyyaa qormaataa murteessuu hin dandeenyu.
Kan akeektan yoo tae, yeroo mana barumsaatti deebi’uun eeyyamame sagantaa qormaataa ilaalchisee imeeliidhaan isin quunnamna. Qormaata guyyaa Sanbataa bakkeewwan lama ykn isaa olitti, ykn bifa walmakaa ta’en danda’amu isaa dabalatee carraawwan adda addaa ilaalati jirra. Filannoon kamti iyyuu yoo xiqqaate unga Amajjii 2021tti hin calqabamu.
Manneewwan barnootaa aanaa Siyaatil jalatti argaman hundi barnoota miidhagaa kan sadarkaa barnootaa, hawaasaa, miiraa fi kan fedhii amala baratoota hundaa guutuu danda’u dhiyeessuudhaaf kutannaa qabu.
Daa’ima kiyya qorannaa Barnoota Fooya’aatiif moo ykn kan Tajaajila Dandeettii Ol’aanaatifan akeekuu qabaa?
Kutaan Barnoota Fooya’aa kenna addaa fi dandeettii daa’ima tokko tokkoo guddisuudhaaf ciminaan ni hojjata. Daa’imni keessan dandeettii adda kan agarsiisu ykn agarsiiftu ta’e ykn daa’imman umurii isaa ykn ishee ti ol barachuudhaaf ykn ibsuudhaaf dandeetti kan qabu ykn qabdu ta’e daa’ima keessan qormaata Barnoota Foya’aatiif ykn Tajaajila Dandeettii Cimoo/ Highly Capable services/ tiif akeekuu ilaalcha keessa galchaa.
Fakkeenyaaf, daa’imni keessan waantoolii armaan gadii irratti cimina kan agarsiisan yoo ta’e:
Gaggeessuu, Uumuu, Kaka’umsa, fi Barnoota
Hiriyoota uumurii isaaniitii ol kanaan dandeetti agarsiisuu:
Walqunnamtii irratti cimaadha/cimtuudha, ofitti amantaa qabaachuu, dhimmoota qindeessuu fi dhimmoota irratti caasaa/bifa uumuu.
Nuura cimaa qabaachuu fi yaadaa uumame haaraa fi/ ykn furmaata fiduu irratti dandeetti agarsiisuu.
Inni ykn ishiin yoo wanticha irratti fedhii qabaate/tte ala irraa kaka’umsa xiqqaa qofaan hojicha dursee gammachisaa ta’e hordofuudhaan ykn projaktii yeroo dheeraa irratti cimina ni agarsiisu.
Inni ykn Ishiin dhimma tokko irratti odeeffannoo heddu qabaachuudhaan gadifageenyaan dadabalanii hubannoo qaban kennuu.
Barataan keessan tarii dandeettii addaa kan asi irratii hin ibsamnee fi hin beekamne agarsiisuu ni danda’a.
Dandeettiin daa’ima keessanii tarii mana barumsaa keessatti ykn alatti kan agarsiifamu ta’uu ni dnada’a. . Dandeettiiwwan armaan olitti ibsaman hundi bakkeewwn adda addaatii fi hojiiwwan adda addaa irratti ibsamuu ni dnada’u, fakkeenyaaf:
Hojiiwwan guyyaa guyyaa irratti
Yeroo projaktii irratti hirmaatan
Sochiiwwan MB duraa fi booda
Bakkee wiirtuu hawaasaatti
Barattoota afaan heddu haasa’anuuf, dandeettiiwwan kun afaan kamiin iyyuu ibsamuu kandanda’uudha. .
Koreen Filannaa Bakka Adda Addaa Irraa Babba’e, ykn MSC, (WAC 392-170-070) ga’umsa Dandeettii Cimaa (Highly Capable) ykn tajaajila Barnoota Fooya’aa (Advanced Learning), murteessuudhaaf ragaawwan dhiyaatan hunda ni ilaala. Kutaan Barnoota Fooya’aa karoora addaan baafachuu kan seera Steetaa gutuu fi qorannaa Covid-19 irraan kan ka’e kan uulagaalee naannoo guutu qopheessuudhaaf itti gaafatamtoota Steetaa fi qo’attoota biyyoolessaa wajjin ni hojjata. Odeeffannoo haaraa jiru beeksisuudhaaf maatiiwwan ji’a Sadaasaa ni qunnamamu.
Maaloo hubadhaa, Barattoonni bakkeewwan tokko tokko irratti cimina guddaa agarsiisanii bakkeewwan tokko tokko irratti immoo dadhabbina agarsiisuun isaanii beekamaadha. Daa’imni keessan dandeettii addaa kan agarsiisan yoo ta’e, maaloo qormaata Barnoota Fooya’aatiif ykn tajaajila Dandeettii Cimoo (Highly Capable) tiif yoo akeektan kennaa fi dandeettii daa’imni keessan qaban guddisuudhaaf isin gargaaruu ni dandeenya.
Guuca Eeyyamaa kan Warra/Guddisaa (Barbaachisaadha)
Gaafii kam iyyuu yoo qabaattan, maaloo biiroo keenya karaa armaan gadiitiin qunnamaa: advlearn@seattleschools.org ykn 206-252-0130